प्रश्न Lufthansa Pack
1 वर्ष9महिना पहिले #732 by Bgf
मैले यस पक्षबाट Lufthansa प्याकेज स्थापना गरेको छु र मसँग एयरबस एक्क्सम्युक्स समस्या छ।
जब म NAV, COM, ADF आदि सेटिङको लागि काम नगरेको कुकपिटमा बटन थिच्दछ। यसको अर्थ म यी प्यारामिटरहरू सेट गर्न सक्दिन।
अन्यथा यो विमान धेरै राम्रो छ र म प्रायः प्रयोग गर्न चाहन्छु।
शायद कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ?
1 वर्ष9महिना पहिले #754 by Bgf
मैले एउटा समाधान भेटें
1 वर्ष9महिना पहिले #755 by Skycamel
राम्रो! अनि सायद तपाईंले समाधान साझा गर्न सक्नुहुनेछ? ...
1 वर्ष9महिना पहिले #759 by Bgf
मैले यसलाई प्यानलमा प्रतिलिपि बनायो
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Skycamel
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.300 सेकेन्ड